ေမာင္တုိင္ပင္ ဧ။္ အေတြးပံုရိပ္မ်ား: ကိုဗစ်အလွန်
ကိုဗစ်ကာလအတွင်း နဲ့ beyond COVID ကမ္ဘာကလူတွေ ရဲ့ life style ပြောင်းလဲမှရပါတော့မယ်--minimalism သိုမဟုတ် frugal living တွေနဲ့အစားထိုးကြရတော့မလားစဥ်းစားသင့်နေပြီ--နေရာတကာမှာ New Normal style ကအရေးပါနေပြီ AI လိုပဲခေတ်လူသားတွေအလေးထားရတော့မှာပါ-- luxury& high end products တွေ ကိုလူတွေစိတ်မဝင်စားတော့ပဲအစားအသောက်နဲ့ ဆေးဝါး၊ ဖြည့်စွက် အစာ supplyment တွေကို ပဲ ဦးစားပေးလာကြပါတော့မယ်--အဝတ်အစားတောင်ထိုင်းလုပ် မြန်မာလုပ် ချည် တီရှပ်တွေဦးစားပေးဝတ်ဆင်လာကြလိမ့်မယ် H&M, M&S, ZARA တွေမှာဖက်ရှင်ကျတဲ့အဝတ်အစားတွေတောင်လိုလာပုံလိမ့်မယ် မြန်မာအထည်ချုပ်တွေ စျေးပေါတဲ့ ချည်သား Tee shirt တွေချုပ်လာရလိမ့်မယ်--နောင်တစ်ခုက အီးယူကပေးနေတဲ့ GSP အခွင့်အရေးလည်း ရချင်မှရနိုင်ပါတော့မယ်--အဲတော့ labour intensive industry စက်ရုံတွေ ဘယ်ဖက်ကိုပြောင်းမလဲ ? Holiday တွေအပန်းဖြေခရီးထွက် တာတွေ လျော့လာတာနဲ့အမျှ လေယာဥ် ခရီးစဥ်တွေသဘော်ခရီးစဥ် တွေ ယခင်လိုခရီးသည်ံ အရေအတွက်မျိုးရမလာနိုင် တော့ပါ ဟိုတယ်တွေလည်းအလားတူပါ--ဝတ်ရေး နေရေးမှာ luxury style ကိုရှောင်ကျဥ်လာပြီး ဇူကာဘတ်တို့လိုသဌေးလိုမျိုးရိုးရိုးလေးပဲဝတ်စားဆင်ယင်လာကြလိမ့်မယ်--
cruise သဘော်တွေတောင် ဟိုတယ် ပြောင်းလို့မရရင် service appartment ဖြစ်လာနိုင်သလို studio apartment ဖြစ်လာနိုင်တယ်--လေယာဥ်အချို့ လည်း cargo တွေပြောင်း သယ်လာကြလိမ့်မယ်--ဘာကြောင့်ဆိုတော့ ကမ္ဘာမှာ supply chain ကအရေးကြီးလာပြီ တပြိုင်တည်း global logistic နဲ့ ထွက်လာမဲ့ သီးနှံများ ရဲ့ logistic ကအရေးကြီးလာလိမ့်မယ် မြန်မာလိုစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာကနေ အစားအစာလိုအပ်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့တစ်ဖက်ခြမ်းကို ဘယ်နည်းနဲ့ ပို့ကြမလဲ ?စိုက်ပျိုးရေး ကအရေးပါလာပြီ မြန်မာစိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေး ဝန်ကြီး တို့ ဒုတိယ ဝန်ကြီးတို့ ဒီအရေးမှာဘယ်လိုဦးဆောင်လုပ်ကြမလဲ ခါတိုင်းလိုရိုးရိုးပဲ နောက်ကလိုက်လုပ်နေလို့ကတော့ ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး--အားထည့်ဖို့လိုတယ် -- initiative လိုတယ်--သူတို့ကြည့်ပြီး စိတ်တော့အတော်လေပါတယ်--
မြို့ပြတွေမှာလည်း ကားလမ်းမတွေကျဥ်းပစ်ပြီးလူသွားလမ်းတွေ စက်ဘီးလမ်း တွေထည့်သွင်းတည်ဆောက်လာမယ်--ရန်ကုန်လိုစီးပွါးရေးမြို့တော်မှာနယ် လိုင်စင်ကားတွေကန့်သတ်လိုက်သင့်တယ်--စနေဖြစ်ဖြစ် တနဂ်နွေဖြစ်ဖြစ် တစ်ရက်သို့မဟုတ်၂ ရက် ကိုရပ်ကွက် တွင်းနေနေသူအများမှအပမော်တော်ကား အားလုံးလော့ဒေါင်းလုပ် သင့်တယ် မော်တော်ကားအစားebike စီး ဒါမှမဟုတ် စက်ဘီးစီးနိုင်တယ် public transport စီးနိုင်တယ် -- digital transaction တွေလုပ်လာကြလိမ့်မယ်-- user friendly ဖြစ်အောင်ကျိုးစားဖို့ ပြောချင်တယ်--မြန်မာမှာ digital banking ဘယ်ဘဏ် အကောင်းဆုံးလဲလို့ မေးကြည့် ရင်CB လို့ပြောကြတယ် တချို့ ဘဏ်တွေ core banking တောင်ကောင်းကောင်းမတည်ဆောက်နိုင်ဘူး -- ဗဟိုဘဏ်ကmerging အတင်း လုပ်ခိုင်းသင့်တယ် ထင်တယ်--ပြည်သူ customer မျက်နှာပဲကြည့်သင့်တယ်--
မိုးပျံလမ်းအစား ဘန်ကောက် မှာ လို မြို့ထဲမှာsky walk တွေဆောက်မပေးသင့်ဘူးလား? ပြည်သူတွေလမ်းလျှောက်ပါစေ ဘတ်စ်ကား တွေကတော့ပြေးဆွဲခွင့်ပြုသင့်ပြီး down town ထဲမှာအရှိန်ကန့်သတ် ထားသင့်ပါတယ်-လမ်းဘေးစျေး ညစျေးတွေ ဖန်တီးပေးသင့်တယ် လက်လုပ်လက်စားတွေလာဝယ်စားနိုင်မယ် အသေးစားထုတ်လုပ်သူတွေလာရောင်းနိုင်မယ်--
စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းအသေးစားလေးတွေကို ပေါ်လာအောင်ဖန်တီးပေးရမယ် bottle neck ကဘယ်မှာလဲ အသိသာချည်း ပါ --ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ရပါမယ်--delivery service တွေဖွံဖြိုးလာနိုင်တယ် super market shopping mall အချို့ လည်း on line service အတွက်လုပ်ငန်းနေရာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေခေတ် ပြန်ထလာမယ် အထူးသဖြင့်တစ်နိုင်တစ် ပိုင် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းတွေကို လူအများအာရုံစိုက်လာကြမယ်--မြေရှိတဲ့သူတွေ home gardening လုပ်လာကြမယ် တိုက်ခန်းနေသူတွေ ဝရံတာမှာ အိုးတွေနဲ့စားပင်သီးပင်တွေစိုက်ကြမယ်--အဲတော့ပျိုးပင် ပန်းပင်ရောင်းသူတွေရောင်းကောင်းလာကြလိမ့်မယ်--လွင်မိုးတို့လိုထုတ်လုပ်နိုင်သူတွေအများကြီးပေါ်လာဖို့ လိုပါတယ် စျေးကွက်ကရှိနေပါတယ် တစ်ခုနဲ့တစ်ခု link မိကြဖို့ပဲ လိုပါတယ်--
အဲတော့ အခုကာလမှာကော beyond COVID ကာလတွေမှာ food လွဲ၍မလိုအပ်တာတွေလူတွေမဝယ်ကြတော့ပါ--on line cooking vedio တွေကြည့်လာကြတာကြောင့် wifi လိုင်းတွေ ဟာ မြို့ပြနေလူတန်းစားတွေအတွက် essentials တွေဖြစ်နေကြအုံးမှာဖြစ်ပါတယ်
Posted by MaungTaing Pin at Saturday, May 16, 2020
Labels: ကိုဗစ် အခြေအနေ